Mint သည် Desktop သစ်ကို Linux Mint မှအဆိုပြုထားသည် Linux မှ
Mint သည် Desktop အသစ် MGSE မှအဆိုပြုထားသည်
နောက်ဆုံးတော့ Clem (Linux Mint ကိုဖန်တီးသူ) နောက်လာမည့်ရေပန်းစားသောဖြန့်ချိမှုအတွက် desktop ၏အနာဂတ်မည်သို့ရှိကြောင်းကိုပြသခဲ့သည်။
Clem ha ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာတင်ခဲ့သည် သူ၏အနာဂတ်အဘယ်အရာကိုရှင်းပြတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် Linux Mint သုံးစွဲသူများအားသင်ကမ်းလှမ်းလိုသော desktop သည်မည်သို့မည်ပုံဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကစပိန်လိုဖတ်နိုင်တယ် ဒီမှာပိုပြီးအဆင်ပြေအောင်သူတို့ကိုငါဒီမှာထားခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းရဲ့အမြင်ကိုမင်းကိုချန်ထားခဲ့တယ်😀
လာမယ့်လွှတ်မြောက်မှုအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ထံစာရေးခဲ့သည့်ရပ်ရွာ၊ မီဒီယာနှင့်စာနယ်ဇင်းသမားများကိုတောင်းပန်လိုပါသည်။ Ubuntu ဖြန့်ချိပြီးသုံးပတ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်လျှို့ဝှက်ချက်များရှိခဲ့ပြီးလူအများစုအတွက်လာမည့် Linux Mint မည်သို့မည်ပုံပုံဖော်မည်ကိုအတိအကျမသိရသေးပါ။ ငါတို့တိတ်ဆိတ်စွာနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ငါမပေးနိုင်တဲ့တစ်ခုခုကိုကတိမပေးချင်လို့ပါ။ ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Lisa ဟုအမည်ပေးထားသော Linux Mint3ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကြိုတင်ကြည့်ရှုရန်အဆင်သင့်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမင်းနှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မင်းရဲ့မှတ်ချက်များနဲ့အကြံပြုချက်များကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။
1 Gnome2နှင့် desktop သစ်များ
2 Gnome3နှင့် MGSE
Gnome2နှင့် desktop သစ်များ
Linux Mint 11 တွင် Gnome 2.32 ကိုသိမ်းထားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ သမားရိုးကျ Gnome desktop သည် Gnome ဖောင်ဒေးရှင်းမှတက်ကြွစွာမဖွံ့ဖြိုးသေးသော်လည်း Linux အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းလူကြိုက်အများဆုံး desktop ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အခြားဖြန့်ချိမှုများသည် Unity နှင့် Gnome3ကဲ့သို့ desktop စနစ်အသစ်များကိုအသုံးပြုသောကြောင့်သုံးစွဲသူများစွာသည်လျစ်လျူရှုခံရပြီး Linux Mint သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။ တစ်လတွင် ၄၀% တိုးလာပြီး Linux desktop ဈေးကွက်တွင် Ubuntu ၏နံပါတ် ၁ ကိုလျင်မြန်စွာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ Gnome 2.32 ကိုနည်းနည်းကြာအောင်ထားချင်သလောက်၊ ရှေ့ကိုကြည့်ပြီးနည်းပညာအသစ်တွေကိုလက်ခံဖို့လိုတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်စားပွဲခုံများအသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းကိုပြောင်းလဲရမည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်တွင်လူများကိုခံစားရစေရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားရမည်ဟုဆိုလိုသည်၊ သို့သော်အခြေခံအုတ်မြစ်သစ်တွင်နည်းပညာအလွှာသစ်တစ်ခုပေါ်တက်ကြွစွာပါဝင်သည်။ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အနာဂတ်၌ကောင်းသောပုံသဏ္keptာန်၌ထားရှိမည်နိုင်ပါသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် Gnome3သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော desktop တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် version အသစ်တစ်ခုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ Linux Mint တွင် desktop တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အချိန်ယူရမည် GNOME3ကျွန်တော်နှင့်အတူရှိခဲ့သောအရာကိုဆင်တူသည် GNOME 2ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျနော်တို့ရိုးရာ desktop ပေါ်မှာဖြစ်နိုင်သမျှထက်အများကြီးပိုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ Linux Mint ၏အနာဂတ်သည် Gnome3ဖြစ်သည်။ Linux Mint ၏ပစ္စုပ္ပန်မှာရိုးရှင်းသောမေးခွန်းဖြစ်သည် -“ Gnome3ကဲ့သို့လူများကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။ ပြီးတော့မပြောင်းချင်တဲ့သူတွေကိုဘာအစားထိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမ်းလှမ်းတာလဲ။ «။
Gnome3နှင့် MGSE
Gnome3သည်တောက်ပ။ စတိုင်ကျပြီးခေတ်မီသည်။ ၎င်းသည်စတိုင်ကျသောစားပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းတွင်ပြissuesနာအနည်းငယ်ရှိသည်။
၎င်းသည် application-centric မဟုတ်ဘဲ application-based မဟုတ်ဘဲ apps များအကြားပြောင်းခြင်း၊ windows များမဟုတ်ပါ။
ဒီလိုမျိုး multitask မလုပ်ဘူး (ဖွင့်ထားတဲ့ windows တွေ၊ systray icon စသည်ဖြင့်မတွေ့ရပါ။ )
ကျွန်တော်မှတ်မိနိုင်သည့် application menus များ, window lists နှင့်အခြားရိုးရာ desktop လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် KDE, Xfce သို့မဟုတ် Windows နှင့် Mac OS တို့တွင်ကွဲပြားသော်လည်းကြည့်ရသည်။ Gnome3သည်အရာအားလုံးကိုပြောင်းလဲနေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းကိုတီထွင်နေသည်။ ဒီနေရာမှာ Linux Mint မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်သူတို့မှားတယ်၊ မမှန်ဘူးဆိုတာမသေချာဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ချရသည်မှာလူများသည်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်စရာအခွင့်အလမ်းမရသောကြောင့်လည်ပတ်မှုစနစ်၏ကျွန်ုပ်တို့၏ရူပါရုံသည်ကွန်ပျူတာသည်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်သင့်ပြီးသင်အဆင်ပြေမည်ဟုခံစားရသည်။ ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ Linux Mint3မှ Gnome 12 သည်သင့်ကွန်ပျူတာနှင့်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ သမားရိုးကျနည်း၊ နည်းလမ်းအသစ်၊ သင်မည်သည့်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်အပေါ်မူတည်သည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Gnome3၏ထိပ်ပိုင်းရှိ desktop layer တစ်ခုဖြစ်သည့် MGSE (Linux Mint Gnome Shell Extensions) ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Gnome3ကိုရိုးရာနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ MGSE အတွင်းရှိအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုသန့်ရှင်းသော Gnome3ရရန်သင်ပိတ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သည့်အရာနှင့်တူသော Gnome3desktop တစ်ခုကိုရရှိရန်သင်ထားခဲ့နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင့်ကိုယ်ပိုင် desktop ကိုဒီဇိုင်းဆွဲချင်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုသာရွေးချယ်ပြီးခွင့်ပြုနိုင်သည်။
MGSE ၏အဓိကလက္ခဏာများမှာ -
အောက်ခြေ panel က
Desktop ဗဟိုပြု workstation (ဆိုလိုသည်မှာ application များမဟုတ်ဘဲ windows များအကြားပြောင်းခြင်း)
System Tray Icon များကိုမြင်နိုင်သည်
MGSE တွင်မီဒီယာဖွင့်စက်ညွှန်ပြချက်နှင့် Gnome3အတွက်အမျိုးမျိုးသောတိုးချဲ့မှုများလည်းပါ ၀ င်သည်။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့ဟောင်းနှင့်အသစ်ရောနှောဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် desktop အသစ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းရိုးရာအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာအသစ်ကိုအလွန်စိတ် ၀ င်စားကြသည်။ သို့သော်အိမ်တွင်လူတိုင်းခံစားရရန်အရေးကြီးသည်။ Linux Mint Desktop သည် Linux Mint desktop နှင့်တူသည်။ Gnome3နှင့် Linux Mint desktops များနှင့်တူသည်။ သင်ဘယ်ဘက်ထိပ်ရှိအက်ပ်များကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ဝင်းဒိုးများသို့မဟုတ်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများစာရင်းနှင့်အတူအက်ပ်များနှင့်လုပ်ငန်းခွင်များအကြားလွယ်ကူစွာပြောင်းနိုင်သည်၊ သင်၏ထိပ်ဆုံးရှိသင်၏သတိပေးချက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီး Gnome3အင်္ဂါရပ်များကိုလက်ဝဲဘက်ထောင့်ရှိလှုပ်ရှားမှုများကိုရယူနိုင်သည်။
Gnome3သည်ဗီဒီယိုအရှိန်မြှင့်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းသည်စနစ်အများစုတွင်ရှိသည်။ Linux Mint 12 တွင်သင်သည် Virtualbox အတွင်း၌သင်သည် Gnome3ကိုသုံးနိုင်သည်ကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်၏ virtual machine တွင် 3D အရှိန်မြှင့်လာပါကမည်သည့်ထပ်မံမောင်းနှင်မှုမျိုးမှမပါဘဲ Gnome3နှင့် MGSE ကိုခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်ကံမကောင်းပါက၊ သင် FallBack မုဒ်သို့ဆင်းသက်ပါလိမ့်မည်။
FallBack mode နှင့် ပတ်သက်၍ အမှားမလုပ်ပါနှင့်၊ ၎င်း၏အသွင်အပြင်ရှိသော်လည်း Gnome2နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ၎င်းသည် Gnome3၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး Bonobo panel applets ကဲ့သို့သောနည်းပညာများနှင့်အပြည့်အဝလိုက်ဖက်သည်။ ၎င်းကိုသင့်လျော်သော "fallback mode" ဟုခေါ်ပြီး Gnome3သည် hardware နှင့်ကိုက်ညီမှုပိုများလာသောကြောင့်အချိန်နှင့်အမျှပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
MATE သည် Gnome 2.32 ၏ fork တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Gnome2ကဲ့သို့ပုံစံနှင့်ပြုမူသည်။
Gnome 2.32 နှင့်အတူပြproblemနာက Gnome3နှင့်ကွဲလွဲနေသည်။ ၎င်းသည် repositories အတွင်းပြproblemsနာများစွာကိုဖန်တီးပေးသည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Gnome2နှင့်3နှစ်ခုလုံးကို run ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင် MATE သည်သူမနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် ။ သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် MATE နှင့် Gnome3နှစ်ခုလုံးကို install လုပ်နိုင်ပြီး login မျက်နှာပြင်ရှိ desktop တစ်ခုအကြားပြောင်းလဲနိုင်သည်။
လက်တွေ့တွင် MATE သည်အသစ်သောစီမံကိန်းဖြစ်ပြီးဒေသများစွာတွင် Gnome3နှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသောဤပtheseိပက္ခများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ဖြေရှင်းရန် MATE developer များနှင့် ပူးပေါင်း၍ Linux Mint3DVD ထုတ်ဝေမှုတွင် Gnome 12 နှင့် MATE နှစ်ခုစလုံးကိုပုံမှန်တပ်ဆင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MATE ၏နောက်ထပ်ပြproblemနာတစ်ခုမှာ Gnome (3) နှင့်သဟဇာတဖြစ်ရန်အတွက်သူသည်သူ့ဟာသူအများစုကိုအမည်ပြောင်းရန်လိုအပ်ပြီးအကျိုးဆက်အနေဖြင့် Gnome2အတွက်တီထွင်ထားသော applications များနှင့် themes များသည်၎င်းနှင့်လိုက်ဖက်ညီရန် MATE သို့ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။ ။
gnome ပconflictsိပက္ခများနှင့်လျှောက်လွှာနှင့်ဆောင်ပုဒ်ပြောင်းရွှေ့ပြင်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ထို့ကြောင့် MATE သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ LiveDVD ကိုလုပ်လျှင်၎င်းသည်အချို့သောကြမ်းတမ်းသောအစွန်းများနှင့်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်၏တုံ့ပြန်ချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြissuesနာများကိုလျင်မြန်စွာဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။
နောင်အနာဂတ်တွင်သင်သည်စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအသုံးမပြုပါ။ Linux Mint သည်သန်းပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူများနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်တွင်စတုတ္ထမြောက်လူကြိုက်အများဆုံး desktop operating system ဖြစ်ပြီးယခုနှစ်တွင် Ubuntu ထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များရှိကြော်ငြာများကိုကြည့်ရှု။ နှိပ်သောအခါ Linux Mint သည်၎င်း၏ဝင်ငွေကိုရရှိသည်။ ဝင်ငွေအရ၎င်းသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်ဘရောင်ဇာများဆီသို့ ဦး တည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာအသုံးပြုသူများကိုဤ ၀ င်ငွေ၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောရန်ပုံငွေများကိုလက်ခံစဉ်ရှာဖွေခြင်းအတွေ့အကြုံကောင်းကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူမှရရှိသောဝင်ငွေများကိုမျှဝေခြင်းမပြုသည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကို Linux Mint မှဖယ်ရှားပြီးသင်၏ကြော်ငြာများကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။
Linux Mint 12 နှင့်လာမည့်ထုတ်လုပ်မှုများတွင်သုံးစွဲသူများအားအောက်ပါစီးပွားဖြစ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များဖြစ်သည့် Ask.com, Google, Amazon, eBay, Wikipedia နှင့် non-စီးပွားဖြစ်ရှာဖွေရန်မျှော်လင့်သည်။
၀ က်ဘ်ပေါ်ရှိသင်၏လုပ်ဆောင်မှုများ၊ သင်ရှာဖွေသောမေးမြန်းချက်အားလုံးနှင့်သင်ဝယ်ယူထားသောထုတ်ကုန်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းအတွက်ငွေကြေးအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်သာမကလှူဒါန်းမှုများနှင့်စပွန်ဆာများပိုမိုရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အစဉ်အလာအရနို ၀ င်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ဝန်းကျင်တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြန့်ချိမည်။ ထိုအရာနှင့်အတူအရည်အသွေးသည်အချိန်ကာလထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်၊ ကျနော်တို့ "အခါအဆင်သင့်" လွှတ်ပေးရန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုငါသေချာမပြောနိုင်ပါ။ ငါမူကားငါတို့မူကား, ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Gnome3desktop သည်အဆင်သင့်ရှိပြီးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သည်။ bug 10 ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်သော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည်အသေးစားဖြစ်ပြီး RC ကိုမတိုင်မီသို့မဟုတ်ပြီးနောက်တွင်ပြုပြင်နိုင်သည်။
Ubuntu3ကို သုံး၍ စမ်းသပ်စက်တစ်ခုတွင် Gnome 11.10 နှင့်အတူ MATE ကိုကျွန်ုပ်တို့စုစည်းပြီး install လုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည် desktop နှစ်ခုလုံးကိုအောင်မြင်စွာစီမံနိုင်ခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် MATE ကိုထုပ်ပိုးပြီးတည်ဆောက်နေကြသည်။ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာသည်။ RC အနေဖြင့်နောင်တရရန် MATE အချိန်မီရောက်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ ၁၀၀% မသေချာပါ။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်ညှိနှိုင်းမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကြောင့် RC ကိုတည်ငြိမ်သောထုတ်လုပ်မှုတွင်နောက်ပိုင်းတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အချို့ပျောက်နေနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ်နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် CR ရှိရမည်။ တနည်းကား၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သောသတ်မှတ်ရက်ကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အရည်အသွေးဆိုင်ရာပြissuesနာများပေါ်ပေါက်လာပါကဤရက်စွဲသည်ဆီလျှော်မှုမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ Gnome2ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးလူအများစုကအကောင်းဆုံး Gnome desktop ဖြစ်သည်။ Gnome 2006 နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ထပ်တူပြုခြင်းမျိုးကိုပြုလုပ်လိုပြီးလူအများသူတို့ရရှိလိုသောအတွေ့အကြုံကိုဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးသည်။ အကယ်၍ စင်ကြယ်သော Desktop Gnome3ကိုလိုချင်ပါကသူတို့သည် MATE နှင့်ကပ်လိုလျှင်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်သုံးခုအကြောင်းပြောနေတာပါ။ ဒီ post ကိုအသုံးပြုပြီး Linux Mint3ကိုပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးရှိလာမှာပါ။ ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုကြားရတာ၊ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ချက်နဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရချင်တယ်။
Linux Mint ကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်များကိုဖတ်ရန်မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ယခုအချိန်တွင်ဤအရာအားလုံးကိုစကားလုံးတစ်လုံးတည်းဖြင့်သာသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဉာဏ်ရွှင်သော။ ဒါကတစ်ခုသာ extension ကိုဖြစ်သော်လည်း GNOME 3မင်းမြင်နိုင်တာက MGSE ငါတို့နှင့်အတူရှိသည်သောအလားတူအတွေ့အကြုံကိုပေးပါသည် GNOME 2.
အထူးသဖြင့်ငါအချို့လမ်းဆုံလမ်းခွကိုကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ထား GNOME2မှ ported Gtk3 ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်ဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုဖြစ်ပေမယ့်ငါတွေ့ခဲ့တာတွေကိုငါတကယ်သဘောကျတယ် ငါစားသုံးမှုအလွန်အကျွံမဟုတျပါဘူးမျှော်လင့်ပါတယ်
Gnome3ကို repositories တွင်ပြီးပြည့်စုံသောအခါ Debian စစ်ဆေးခြင်းကျွန်ုပ်မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲဤ extension ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်😀 Bravo အတွက် Mint အဖွဲ့ငါအသုံးပြုသူများကိုစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းခေါ်ဆိုပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Mint သည် Desktop အသစ် MGSE မှအဆိုပြုထားသည်
35 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ငါ menu ကိုကြီးမြတ်ကြောင်းကိုသင်တို့ကိုငါမေ့လျော့ .. KDE ခံစားနေရပြီး !!! 😀
အမှန်တရားကတော့ Clem ရဲ့ကြေငြာချက်တကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ငါအရမ်းအံ့အားသင့်မိပါတယ်။ Linux Mint ကလုံးလုံးအောင်မြင်လိမ့်မယ်။
ငါ Ubuntu နှင့်အခြား distros များမှသုံးစွဲသူများကို LinuxMint သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း။ 😀
ကောင်းပြီ၊ ငါကပထမတစ်ခုဖြစ်တယ် ငါစိတ်ကူးကိုကြိုက်တဲ့အခြားဘလော့ဂ်တခုမှာပဲမှတ်ချက်ပေးတာပါ။ အားလုံးကောင်းသွားရင် Ubuntu ကနေထွက်ပြီး Mint ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။
ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်! ငါအရမ်းကြိုက်တယ်! လှပပြီးလှပတင့်တယ်လှပါသည်။ Mint ဒီဇိုင်နာများသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပိုမို၍ အလုပ်လုပ်ကြသည် !!
ဒါဟာအလွန်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒါကိုစမ်းကြည့်လို့ရတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Xfce သည် ဆက်လက်၍ Mint ၏သက်ဆိုင်ရာ Linux Mint ဗားရှင်းတိုးတက်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ပါတယ် Xfce မှာယောက်ျားတွေက၏ဆွဲရ။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့သိပြီးသားဖြစ်သည်။ ဗားရှင်း ၄.၁၀ ကိုလာမည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်၊ ယခုသူတို့ Gtk4.10 သို့ဘယ်အချိန်ရွှေ့ပြောင်းမည်ကိုကြည့်ရှုရန်လိုသည်။
ဒေးဗစ် ဂိုမက်ဇ် (@emsLinux) ဟုသူကပြောသည်
ဒီအဆိုပြုလွှာကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်။ ဒီဒီဇိုင်နာတွေကနေ Ubuntu ကနေအများကြီးသင်ယူနိုင်တယ်။
Extension တစ်ခုအနေနဲ့ GNOME Shell ကအစိမ်းရောင်ရှိနေဆဲဖြစ်လို့၎င်းသည်မည်မျှအဆင်ပြေမည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည် extensions များနှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်ပြofနာများစွာရှိနေသေးသည်။
David Gómez (@emsLinux) ကိုစာပို့ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ Ubuntu ဟာ Linux Mint ကနေအများကြီးသင်ယူရလိမ့်မယ်။ Gnom-Shell သည်အစိမ်းရောင်များရှိသော်လည်းအစိမ်းရောင်ရှိသော်လည်းမှန်ပါသည်၊ သို့သော် Clem သည်ပြproblemsနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်လျှင်၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်တယ်။
gnome2ကို Debian တည်ငြိမ်မှုတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်
ငါဖြန့်ဝေကြိုးစားခဲ့နှင့်စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ။ ယခုငါကြည့်ရှုပါ Xfce gnome2အတွက်ခိုင်လုံသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ သို့သော်၎င်းသည်တိုးတက်ရန်လိုအပ်နေသေးသည်။ ၎င်းသည် developer များအဖွဲ့သည်ရပ်ရွာထံမှလိုအပ်သည့်ပံ့ပိုးမှုရရှိခြင်းရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
Debian Stable မှာလုံခြုံရေးအစီအစဉ်များမှ လွဲ၍ ဘာမှပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ။ ဒါကြောင့်မင်းမှာအဲဒီမှာ Gnome2 ရှိလိမ့်မယ်😀
အကယ်၍ 64b Debian ညှစ်မှုကိုသုံးပါက generic linux လိုဂိုသည်ကျွန်ုပ်၏ avatar အောက်တွင်အဘယ်ကြောင့်ပေါ်လာသနည်း။
ဒီနေရာမှာဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဥာဏ်အချို့ရှိပါတယ်။ သင်အသုံးပြုသောဘရောင်ဇာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားရန်သတိပြုပါ။ https://blog.desdelinux.net/tips-como-cambiar-el-user-agent-de-firefox/
ငါမှာအတူတူပဲပြproblemနာရှိတယ်။ စမ်းသပ်ခြင်း !!!
hehe ကအလုပ်လုပ်ခဲ့ !!!! 🙂
အမှားကတော့ Firefox ပဲ။ သူကဘယ်သူတွေသုံးနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူး ကိုယ်တိုင်ထည့်ပါ။ သို့သော်များသောအားဖြင့် Debian နှင့် distros အချို့ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ 😀
c *** အတွက်သောက်သောက်ပါ
လူးဝစ် Giardino ဟုသူကပြောသည်
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့သတင်းပါ၊ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုပါတယ်၊ ပူစီနံအချစ်ကငါ့အကြိုက်ဆုံးဖျော်ဖြေမှုဖြစ်ပြီးသူငယ်ချင်းတွေအားလုံးအတွက်အကြံပေးတဲ့အရာကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်ခဲ့တယ်၊ သူတို့အားလုံးအတွက်ကောင်းတာပေါ့။
Luis Giardino ကိုပြန်ပြောပါ
အထူးသဖြင့်တော့ Gnk2fork အချို့ကို Gtk3 သို့သယ်ဆောင်သွားမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဒီကိစ္စကိုပြောသောအခါကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုတွေ့ရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ငါစားသုံးမှုအလွန်အကျွံမဟုတျပါဘူးမျှော်လင့်ပါတယ်။ "
ငါလည်းကြိုက်တယ်။ gtk2 ကို ported gnk3fork က shell အတွက် extension ထက်အများကြီးပိုကြာလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် MATE လူတွေဘာလုပ်ကြသလဲဆိုတာငါစိတ်ဝင်စားတယ်။
ဟုတ်တယ်၊ အချိန်အများကြီးယူရမယ်၊ ဒါပေမယ့်ရံဖန်ရံခါ MATE စီမံကိန်းဟာအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ရလိမ့်မယ်။ ငါပြန်လည်သုံးသပ်သောအနေဖြင့် MATE သည် GNOME2package ကိုယူပြီးအမည်ပြောင်းလိုက်သည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့် Gnome2ဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအဆိုပါ packets များသည်ခေတ်နောက်ကျသွားလိမ့်မည်၊ သင့်တွင်သဟဇာတဖြစ်သောစာကြည့်တိုက်များရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ပြေးပါ။
သူတို့ MATE ကို Gtk3 သို့ port စရာမလိုပါ။ Gnome-Fallback ကိုယူပြီး၎င်းတွင်မရှိသေးသောအရာများကိုပေးပါကပိုမိုထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
... ပြီးတော့ဘာလုပ်သင့်လဲ Linux Mint edition?
၎င်းသည် Ubuntu 11.10 နှင့်တူညီသည်
Ubuntu အသုံးပြုသူများမှကျွန်ုပ်တို့သည် Linux Mint MGSE shell ကိုစမ်းသပ်နိုင်သည်
ရင်းမြစ်: WEB UPD8
အခြားရွေးချယ်စရာများကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးငါတို့ရဲ့အရသာနဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တာကမနာကျင်ပါဘူး။ ယခုအချိန်တွင်ငါ Unity နှင့် Global Menu ကိုအတူဆက်လက်။ ဒုတိယ option ကို Gnome Shell ကအဖြစ်
စားပွဲအသစ်သည်မန်းအသင်းမှမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ LMDE တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်တွေ့မည်နည်း။
ပထမ ဦး စွာငါ LNDE မှ Gnome Shell ကိုရိုက်ထည့်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်
မင်းမှန်ပါတယ်…။ သူတို့ကကောင်းသောစိတ်ကူးတစ်ခုတီထွင်ခဲ့ကြသည် - တစ်ခု extension ကို။ ထို့ကြောင့်အလုပ်ကိုသိမ်းဆည်းထားပြီးမျှော်မှန်းထားသောရလဒ်များကိုရရှိသည်။ အကယ်၍ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုမရှိပါက၎င်းကိုပိတ်ထားပြီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဂရိတ်နှင့်စိတ်ကူး။ ကျွန်ုပ်သည် Mint ၏နောက်ထပ်သုံးစွဲသူဖြစ်ပြီးယနေ့တိုင် Ubuntu ထက်သာလွန်သည်။ ငါဒါပြောချင်တယ်။
အကယ်၍ extension သည် modular ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ သင်ကြိုက်သော extension ၏အစိတ်အပိုင်းများကို၎င်း၊ အချို့၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသင် activate လုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဆိုပါက ... ဥပမာအားဖြင့်၊ window selector ကိုဖွင့်ပြီးအထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နှင့် start menu ကိုပိတ်ထားပါ။ gnome အခွံရှိသည့် notifications နှင့် notification area ကိုအောက်တွင်ထားပါ။ ငါကအချိန်ကိစ္စဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်း။
ငါလိုဖြစ်သင့်တယ်ထင်တယ် MGSE ကကျွန်ုပ်အနေဖြင့်၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောတိုးချဲ့မှုမဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့ထဲမှအုပ်စုတစ်စုကိုသင်၏စိတ်စေတနာဖြင့်ပိတ်ထားနိုင်သည်။
ကောင်းပြီဟုတ်တယ်၊ extension သုံးခုရှိတယ်။ သူတို့သည်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ငါ Gnome3desktop ပေါ်မှာ menu ကနည်းနည်းပိုလွန်နေတယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါက disable လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်က workspace နဲ့ window selector ကိုအရမ်းအသုံးဝင်တယ်ဆိုရင် Gnome2လိုပဲကျွန်တော့်အလုပ်ကိုမြန်အောင်လုပ်ပါတယ်။ ထိုသူတို့သည်ထပ်သို့မဟုတ်အသိပေးခြင်းtheရိယာ၏လမ်းအတွက်အနိမ့်, ယခုအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသောအရာမရကြဘူး ... .. ကြီးသော။ Mint သည် Ubuntu ကို အခြေခံ၍ …ကောင်းကျိုးများကိုတည်ဆောက်သည်။ သို့သော်ဆိုးကျိုးများရှိနေသောကြောင့်ယခု Debian Edition တွင်တွေ့ရသည်။
ငါ Gnome3desktop ပေါ်မှာ menu ကိုအနည်းငယ်မလိုအပ်သောထင်ပါတယ်
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒါက Dock ထဲကိုထည့်မထည့်လိုက်ရင်လျှောက်လွှာရှာဖို့အရမ်းငြီးငွေ့စရာကောင်းတယ်။ ငါမီနူးအလွန်အောင်မြင်သောအရာတစ်ခုခုသည်ထင်ပါတယ်။ ဤ extension သည် LMDE တွင်ရှိသည်ဟူသောအချက်သည် Debian Testing ထဲ ၀ င်ရောက်နေသည့် Gnome3ပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။
"low" လို့ဘယ်မှာငါ "down" ... .. "eredado" "inherited" လို့ပြောတယ်ဘယ်မှာလဲ။ ဒီမှာသင်ရေးသားထားသောအရာကိုပြင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေလိုအပ်သည်။
ဟုတ်ပါသည်။ သို့သော် gnome3နှင့် cinnamon တို့၏ကြီးမားသောချို့ယွင်းချက်မှာ၎င်းသည် NVIDIA ၏ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မောင်းများနှင့်ပြတ်တောက်သွားသည်၊ X server သည်သေဆုံးပြီး session ကိုပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
NVIDIA ရဲ့ကိုယ်ပိုင် driver တွေသုံးချင်ရင် cinnamon (သို့) gnome3ကိုလုံး ၀ မသုံးပါနဲ့။
Grub ၏အသွင်အပြင်ကိုအောက်စီဂျင် Grub2 Theme ဖြင့်ပြောင်းပါ
Faience Icon ခေါင်းစဉ် - GNOME အတွက် Faenza Icons 3